China Folding Shopping Trolley mpanamboatra sy mpamatsy |VOSHON
Ny refin'ny vokatra 15.3″D x 13″W x 35.8″H
Lanja entana 6,5 kilao
Fitaovana avo lenta: Ny sarety vita amin'ny fitaovana azo aforitra vita amin'ny raharaha ABS tsara indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana miaraka amin'ny tahony firaka aluminium (matanjaka sy maivana kokoa) dia afaka misintona azy mitsivalana, azo antoka ary azo itokisana.
Fanampiana mahery vaika: Ity sarety fiantsenana ity dia hahazaka ny lanjan'ny entana mavesatra kokoa noho ny sarety entam-barotra hafa.Rehefa misokatra ny vata, ny refy anatiny dia 15.7 * 15.3 * 13 santimetatra ho an'ny toerana fitahirizana be dia be, ny fahafahany dia 55L.Ny fototra dia afaka manohana hatramin'ny 140 lbs ary ny sarony dia afaka manohana hatramin'ny 295 lbs.
Universal Wheels & Rear Wheel Break System: Ny sarety mihodinkodina dia misy kodiaran-droa tsy misy feo 360° azo esorina, mora ovaina rehefa ampiasaina.Ary ny kodiarana efatra misy bokotra frein dia afaka manakana ny dolly tsy hivezivezy rehefa tsy ampiasaina.Kodiaran'ny fingotra anaovana sy fanerena, mora mihodina amin'ny lalana rehetra, miantoka ny faharetana.
Aforeto sy azo amboarina: Ity sarety entam-barotra misy kodiarana ity dia miforitra hatramin'ny 3 ″ matevina ho an'ny fitehirizana kely izay mora apetraka amin'ny fiara na efi-trano rehetra, milanja latsaky ny 6.5 kilao.Ny tahony azo amboarina dia afaka miitatra amin'ny halavany 2 samy hafa ho an'ny fanaraha-maso ary manala ny fitahirizana tsotra.Rehefa mivelatra tanteraka ny tahony, ny haavon'ny vokatra dia 35.8 santimetatra amin'ny ankapobeny.
Fampiasana maro: Ny sarety mandeha dia tsy mety amin'ny fitaterana rehetra avy amin'ny fivarotana entana sy fitaovam-pilasiana.Mety amin'ny valizy, rano amin'ny tavoahangy, fitaovana fanatanjahan-tena, kojakoja zaridaina, fitaovana amoron-dranomasina & kojakoja an-dakozia, fitaovana ho an'ny mpampianatra ho an'ny efitrano fianarana.Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fitaterana, fiantsenana, fitsangatsanganana, fitahirizana portable ary seza.
teo aloha: Hotel Housekeeping Trolley
Manaraka: vata fampangatsiahana fitaratra hatsaran-tarehy
Mini portable fanasan-damba ho an'ny zazakely
Trolley ambongadiny trano fandraisam-bahiny
Toeram-pitaterana entana entin'ny trano fandraisam-bahiny / entana vy tsy misy vy ...
4L manokana ambongadiny fiara mavokely vata fampangatsiahana